Senator Paul Wellstone oo kudhintay Shil Diyaaradeed:
diyaaradaas oo ku dhacday meel u dhow Eveleth, Minnesota waxa kale oo ku dhintay xaaskiisii Sheila, gabar uu dhalay Marcia, saddex shaqalihiisa kamida iyo labadii pilot ee diyaarada wadey. Wellstone waxa uu kamid ahaa labadii musharax ee u tartamayey Aqalka Odayaasha USA ee Soomaalida la kulmay 19kii october.
Warbixintii C/raxman Ceynte
St.paul, MN- shalay saacaddu markeey aheyd 10:22 am- waqtiga Minnesota ayeey diyaaradi la qaraxday oday ka mid ah odayaasha Minnesota, Senetor Paul Wellstone, oo sabtidii hore jaaliyadda soomaalida kula kulmay Minneapolis, isaga iyo ninka eey sida daran u tartamayeen ee Norm Coleman.
Senetorkan 58 jirka ah wuxuu ku dhashay agagaarka Washington DC 1944, waxaana dhalay waalid ka soo qaxay waddanka Ruushka, 1963-dii ayuu guursaday xaaskiisa sheila, shahaadada ugu sareysa ee (ph.D ) ayuu ka heystaa jaamacadda North Carolina, wuxuuna soo bartay culuumta siyaasadda, wuxuuna aqalka odayaasha ee mareykanka ku biiray 1990, xilligaas oo uu si lama filaan ah ugu guuleystay doorashooyinkii waagaas.
inkastoo uusan Minnesota ku dhalan kuna barbaarin, haddana wuxuu heystay taageerada inta badan ama aqlabiyadda reer minnesota sida eey ifafaalayaashu tusayeen, wuxuuna senator-ku ahaa midka ugu furfuran ee ku jira aqalka odayaasha waddankan, marka laga hadlayo sharci dajinta, waligiis wuu ka soo horjeeday dagaalada eey mareykanku hogaaminayaan ee caalamka ka socday, ka soo billow kii Vietnam, ku keen illaa iyo kan hadda loo dig iyo dam leeyahay ee Ciraaq lala beegsanayo oo uu senator-ku dhawaan ku tilmaamay " nasiib xumo ka jirta maamulka waddankan".
xizbiga dimuquraadiga ah ee uu ka soo jeedo ayaa maanta eey usoo hoyatay dhabar jab aan caadi aheyn, dhimashada mid ka mid ah ruug cadaagoodii, wellstone oo shaqo macallinimo jaamacadeed darteed ugu soo guuray Minnesota ayaa si bareer ah u taageeri jiray in magaalda Al-Quds (Jerusalam)ee barakeysani eey noqoto caasimadda aan kala qeybsaneyn ee dalka Israel.
maanta mar aan bartamaha magaalada St.paul soo indha-indheeyey, waxaa dadka iiga muuqatay ineey aad uga walwalsan yihiin dhacdadan naxdinta leh.
dayuurad nooceedu yahay King-Air 2000 oo laba motooreyna ah ayaa kula dhacday senetorka meel 7 mayl u jirta airport-ka Eveleth, Minnesota, halkaas oo uu doonayey inuu ka qeyb qaato aas la aasayey mid ka mid ah ruug cadaaga sharci dajinta gobolkan minnesota, wuxuuna caawa fiidkii kula ballansanaa inuu la doodo dhigiisa Mr Coleman, magaalada Duluth ee gobolkan Minnesota.
waxaa la socday xaaskiisa Sheila, gabadhiisa Marcia & 3 kamid ah shaqaalihiisa, dadkan & duuliyayaashii diyaaradaba oo dhamaantood halkii ku dhintay, ha yeeshee senetorka waxaa kale oo u jooga laba wiil oo uu dhalay oo aan shilkaas kula jirin isaga.
dhanka codbixinta soomaalida marka la eego ayaa la isla dhex marayey ineey dhanka ninkan dhintay eey woxoogaa u yara badnaayeen, bal si aan arrintaas wax uga ogaado ayaan galabta wacay Mr Maxamud Shafi oo ka mid ah guddiga codbixiyayaasha soomaalida, isla markaana ah xubin firfircoon oo ka mid jaaliyadda soomaalida, waxaanan weydiiyey arrintaas waxa ka jira, wuxuuna iigu jawaabay " een weey jirtaa in isaga la sheegayo in loo badnaa, runtiina wellstone soomaalida wax badan buu u qabtay " isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu raaciyey " waa ninka kaliya ee inta xafiiskiisa loogu tago lagu dhihi jirtay: hooyadeey baan rabaa in la ii keeno ee warqad ii qor, eena qori jiray isla markiiba " laakiin Mr shafi wuxuu ku celceliyey ineey muhimmada kulankii maalin dhaweyd eey aheyd in jaaliyadda soomaalidu xiriir wanaagsan la yeelato qof alla iyo qofka ku guuleysta doorashada hadda lagu wado ineey Nov shanteeda qabsoonto.
Arrinta sheegidda mudani waxeey tahay in xizbiga dimoqraadiga ah laga doonayo ineey reer Minnesota ka soo dhex helaan nin u dhigma Sen. Wellstone oo cadkiisa goosan kara, si eey usii lijaamiyaan halka cod ee eey ku hoggaaminayaan aqalka odayaasha waddankan.